CO2 maka akwarium, gịnị ka ọ bụ maka gịnị kpatara o ji dị mkpa? | Nke azụ
Natalia Cerezo | 13/09/2021 08:30 | Ngwa
CO2 maka akwarium bụ isiokwu nwere ọtụtụ obere achicha na naanị akwadoro maka ndị na -achọ mmiri mmiri, ebe ịgbakwunye CO2 na akwarium anyị nwere ike imetụta ọ bụghị naanị osisi anyị (ka ọ dị mma ma ọ bụ ka njọ) kamakwa azụ.
N'isiokwu a, anyị ga -ekwu ihe omimi gbasara ihe CO2 bụ maka akwarium, kedu otu ngwa, ka esi agbakọ ọnụọgụ CO2 anyị chọrọ ... Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye n'ime isiokwu a, anyị na -akwadokwa akụkọ a na CO2 arụrụ n'ụlọ maka akwarium.
1 Kedu ihe ejiri CO2 mee na akwarium
2 Kedu ka ngwa ikuku aquarium CO2
2.1 Ihe dị n'ime ngwa
3 Ogologo oge ole ka karama CO2 maka akwarium ga -adịru?
4 Etu ị ga -esi tụọ ọnụọgụ CO2 na akwarium
4.1 Akwụkwọ ntuziaka
4.2 Akpaaka usoro
6 Enwere nnọchi maka CO2 na akwarium?
Kedu ihe ejiri CO2 mee na akwarium
CO2 bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa na akwarium a kụrụ, ebe ọ bụ na enweghị ya osisi gị ga -anwụ ma ọ bụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, na -arịa ọrịa. Ọ bụ ihe dị mkpa ejiri na photosynthesis, n'oge a na -ejikọ CO2 na mmiri na ìhè anyanwụ ka osisi ahụ wee too. N'ịlaghachi azụ, ọ na -ewepụta ikuku oxygen, ihe ọzọ dị mkpa iji hụ na ịdị ndụ na ahụike nke akwarium gị.
N'ime gburugburu ebe aka mmadụ dị ka akwarium, anyị ga -enye osisi anyị nri ndị ha chọrọ ma ọ bụ ha agaghị eto n'ụzọ ziri ezi. Maka nke a, CO2, nke ihe ọkụkụ sitere n'okike na -enwetakarị site na apịtị apịtị na ahịhịa ndị ọzọ na -erekasị ahụ, abụghị ihe juputara na akwarium.
Kedu ka anyị si mara ma akwarium anyị ga -achọ CO2? Dị ka anyị ga -ahụ n'okpuru, ọ dabere na oke ọkụ akwarium na -enweta: ka ọkụ na -abawanye, otú ahụ ka CO2 ga -achọkwu osisi gị.
Kedu ka ngwa ikuku aquarium CO2
Enwere ọtụtụ ụzọ iji webata CO2 n'ime mmiri akwarium gị. Agbanyeghị na enwere ụzọ ole na ole dị mfe, nke anyị ga -ekwu maka ya ma emechaa, ihe kacha arụ ọrụ bụ ịnwe ngwa na -agbakwunye carbon na mmiri mgbe niile.
Ihe dị n'ime ngwa
Anself - DIY Kit de...
O doro anya nhọrọ kacha atụ aro site na ndị na -agụ mmiri mmiri bụ ngwa CO2, nke na -emepụta gas a oge niile, nke mere na ọ ga -ekwe omume ịhazigharị nke ọma etu CO2 si abanye na akwarium, ihe osisi na azụ gị ga -enwe ekele. Ndị otu a nwere:
Karama CO2. Ọ bụ kpọmkwem na, karama a na -ahụ gas n'ime ya. Nnukwu ka ọ bụ, ogologo oge ọ ga -adị (ezi uche). Mgbe ọ gwụchara, a ga -emezigharị ya, dịka ọmụmaatụ, jiri cylinder CO2. Ụfọdụ ụlọ ahịa na -enyekwa gị ọrụ a.
Onye nhazi. Onye nhazi ahụ na -arụ ọrụ, dị ka aha ya na -egosi, mezie nrụgide nke karama ebe CO2 dị, ya bụ, wedata ya iji mee ka ọ nwekwuo ike.
Mgbanwe Onye na -agbasa ihe “na -agbaji” ikuku CO2 obere oge tupu ha abanye na akwarium ruo mgbe ha ga -aghọ ezigbo alụlụ, yabụ na -ekesa ha nke ọma n'ime akwarium niile. A na -atụ aro ka ị tinye mpempe a na mpụta nke mmiri dị ọcha site na nzacha, nke ga -agbasa CO2 n'ime akwarium.
Tube na -eguzogide CO2. Ọwa a na -ejikọ onye na -ahazi ya na onye na -agbasa ihe, n'agbanyeghị na ọ dị ka ọ dị mkpa, ọ dị mkpa, ị nweghị ike iji ya, ebe ị ga -agba mbọ hụ na ọ na -eguzogide CO2.
Solenoid. Na mgbakwunye na inwe ezigbo aha nke na -ekerịta aha ya na akwụkwọ akụkọ Mircea Cartarescu, solenoids bụ ngwaọrụ bara uru nke ukwuu, ebe ọ bụ na ha na -ahụ maka imechi valvụ nke na -enye CO2 mgbe enweghị ọkụ nke awa (na osisi abalị anaghị achọ CO2 ebe ọ bụ na ha anaghị photosynthesize). Ha chọrọ ngụ oge iji rụọ ọrụ. Mgbe ụfọdụ, anaghị etinye solenoids (ma ọ bụ ngụ oge maka ha) na ngwa akwarium CO2, yabụ a na -atụ aro ka ị hụ na ha gụnyere ya ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị inwe otu.
Ogbe afụ. Agbanyeghị na ọ dịghị mkpa, ọ na -enye gị ohere ijikwa ọnụọgụ CO2 nke na -abanye na akwarium n'ụzọ dị irè karị, ebe ọ na -eme nke ahụ, na -agụta afụ.
Nlele nyocha. Ụdị karama a, etinyeghị ya na ụfọdụ ngwa, na -enyocha ma na -egosi ọnụọgụ CO2 nke akwarium gị nwere. Ọtụtụ na -enwe mmiri mmiri nke na -agbanwe agba dabere ma itinye uche ya dị ala, ziri ezi, ma ọ bụ dị elu.
Ogologo oge ole ka karama CO2 maka akwarium ga -adịru?
Eziokwu bụ na ọ na -esiri m ike ikwu n'ezie ka karama CO2 dịruru, ebe ọ ga -adabere na ego ị tinyere na akwarium, yana ugboro ole, ikike ... agbanyeghị, a na -ewere na karama ihe dị ka lita abụọ nwere ike ịdị n'etiti ọnwa abụọ na ise.
Etu ị ga -esi tụọ ọnụọgụ CO2 na akwarium
Eziokwu bụ na Ọ dịghị mfe ma ọlị gbakọọ pasent CO2 nke akwarium anyị chọrọdị ka ọ dabere na ọtụtụ ihe. Na ihu ọma, sayensị na teknụzụ dị ebe ahụ ka ewepụta ọkụ n'obi ọzọ n'ọkụ. Agbanyeghị, iji nye gị echiche, anyị ga -ekwu maka ụzọ abụọ a.
Nke mbụ, anyị ga -akụziri gị usoro ntuziaka iji gbakọọ ego CO2 gị akwarium chọrọ. Cheta na, dịka anyị kwuru, nkezi dị mkpa ga -adabere n'ọtụtụ ihe, dịka ọmụmaatụ, ikike nke akwarium, ọnụọgụ osisi ị kụrụ, mmiri a na -edozi ...
Primero ị ga -agbakọọ pH na ike nke mmiri iji mata pasent CO2 nke dị na mmiri akwarium gị. N'ụzọ dị otú a, ị ga -amata pasent CO2 nke akụrụngwa akwarium gị chọrọ. Ị nwere ike ịchọta ule iji gbakọọ ụkpụrụ ndị a na ụlọ ahịa pụrụ iche. A na-atụ aro ka pasent CO2 dị n'agbata 20-25 ml kwa lita.
Mgbe ahụ ị ga -agbakwunye CO2 nke mmiri akwarium chọrọ (Ọ bụrụ na ikpe ahụ emee, n'ezie). Iji mee nke a, gbakọọ na enwere ihe dị ka afụ CO2 iri n'otu nkeji maka lita mmiri 100 ọ bụla.
Ụlọ ọrụ Glosso - Kit nke ...
Obi abụọ adịghị ya, nke a bụ ụzọ kachasị mma iji gbakọọ ma ego CO2 dị na akwarium anyị ziri ezi ma ọ bụ na ọ bụghị. Maka nke a, anyị ga -achọ onye nnwale, ụdị karama iko (nke a na -etinye na iko mmịpụta ma mee ya dị ka mgbịrịgba ma ọ bụ afụ) nwere mmiri n'ime ya nke na -eji agba dị iche iche agwa maka ọnụọgụ CO2 dị na mmiri. Dị ka ọ na -adị, agba iji gosi nke a na -abụ otu mgbe niile: acha anụnụ anụnụ maka ọkwa dị ala, odo maka ọkwa dị elu na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka ọkwa kacha mma.
Ụfọdụ ule ndị a ga -ajụ gị ka ị gwakọta mmiri akwarium n'ime ngwọta, ebe ndị ọzọ ọ gaghị adị mkpa. N'ọnọdụ ọ bụla, na -agbaso ntuziaka ndị nrụpụta mgbe niile ka ị ghara ịtụ ụjọ.
Okwu banyere CO2 na akwarium dị mgbagwoju anya, ebe ọ bụ chọrọ ndidi, ezigbo ngwa na ọbụlagodi ọtụtụ chi ọma. Ọ bụ ya mere anyị ji kwadebe ndepụta ndụmọdụ ị nwere ike iburu n'uche mgbe ị na -abanye ụwa a:
Etinyela ọtụtụ CO2 n'otu oge. Ọ ka mma ịmalite nwayọ wee wuo ọkwa carbon gị nke nta, ruo mgbe ị ruru pasent achọrọ.
Rụba nke ahụ ama, ka mmiri na -agagharị (n'ihi nzacha, dịka ọmụmaatụ) ka ị ga -achọkwu CO2, ebe ọ ga -apụ n'ihu mmiri akwarium.
N'ezie ị ga -eji mmiri dị na akwarium gị mee ọtụtụ ule ruo mgbe ịchọta oke CO2 ruru maka nke a. Ya mere, a na -atụ aro gị ka ị mee nnwale ndị a na -enweghị azụ ọ bụla, yabụ ị ga -ezere itinye ha n'ihe egwu.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa obere CO2, gbanyụọ sistemụ otu awa tupu ọkụ apụọ ma ọ bụ mgbe chi jiri, a ga -enwe ohere fọdụụrụ osisi gị ma ị gaghị emefusị ya.
Enwere nnọchi maka CO2 na akwarium?
Dị ka anyị kwuru na mbụ, nhọrọ nke ngwa iji mee CO2 arụrụ n'ụlọ bụ nke kachasị mma maka osisi dị na akwarium gị, agbanyeghị, n'ihi na ọ bụ nhọrọ dị oke ọnụ ma sie ike, ọ naghị adịkarị mma maka mmadụ niile. Dị ka ndị nnọchi, anyị nwere ike ịhụ mmiri mmiri na ọgwụ:
Ụzọ kachasị mfe iji tinye CO2 na akwarium gị bụ na -eme ya n'ụzọ mmiri mmiri. Karama ndị nwere ngwaahịa a gụnyere nke ahụ, ọnụọgụ carbon (nke a na -ejikarị okpu karama na -atụkarị) n'ụdị mmiri mmiri nke ị ga -etinye na mmiri akwarium gị site n'oge ruo n'oge. Agbanyeghị, ọ bụghị ụzọ dị nchebe, ebe ọ bụ na mkpokọta CO2, n'agbanyeghị na ọ na -agbaze n'ime mmiri, anaghị agbasa ya oge ụfọdụ. Na mgbakwunye, enwere ndị na -ekwu na ọ merụrụ azụ ha.
Mbadamba ụrọ ndị a nwekwara ike ịchọ akụrụngwa dị iche, ebe ọ bụrụ na etinyere ha n'ime akwarium, ha na -ada n'otu ntabi anya kama ime nke nta nke nta, nke mere na ha abaghị uru ọ bụla maka osisi wee hapụ nsị nwere ike ịdị mgbe. ụbọchị na ndabere. Ka o sina dị, enwere nhọrọ dị mfe ebe ngwaahịa a bụ naanị n'ime mmiriagbanyeghị, ha nwere ike ha agaghị akọwa nke ọma.
Akwarium CO2 bụ isiokwu dị mgbagwoju anya nke chọrọ ngwa na ọbụna mgbakọ na mwepụ iji chọta oke ruru nakwa na osisi anyị na -eto nke jupụtara na ahụike. Gwa anyị, ị nwere akwarium a kụrụ? Kedu ihe ị na -eme n'ọnọdụ ndị a? Ị bụ onye na -akwado ndị na -emepụta CO2 arụrụ n'ụlọ ma ọ bụ na -ahọrọ mmiri mmiri ma ọ bụ ọgwụ?
Fuentes: Akwarium, Dennerle
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Ngwa » CO2 maka akwarium